ကိုယ် စဆွဲတုန်းက အသက်ကြီးကြီး ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ပုံ ပါ။ ဆွဲရင်းဆွဲရင်းနဲ့ အမျိူးသမီးလေးပုံ ဖြစ်လာပြီဆိုတာ သတိထားမိလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မောင်မစ္ဈကတော့အဖြစ်မခံဘူး၊ မိန်းမဆိုလဲ မိန်းမဘဲဆွဲတော့မယ်ဆိုပြီး ဆွဲချက်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်မထင်တဲ့ မမဆူဇီတို့ တော်ချက်ပြောပါတယ်။ ပုံတူဆွဲစားရင် ငတ်ပေါက်တိုးမှာ။ ပုံထဲက နှုတ်ခမ်းပုံစံကိုလည်း လုံးဝစိတ်တိုင်းမကျပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ကောင်မလေးပုံက တော်လှန်ရေးရဲမေလိုလို ဘာလိုလို ယောက်ျားဆန်ဆန်ရုပ်လေးနဲ့၊ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း မျက်နှာကျမျိူး မေးရိုးကားကားလေးနဲ့မို့ အမှတ်တရ Digitalize လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ အလျင်းသင့်ရင် ဆက်ဆွဲပါဦးမယ်။
(နောက်ဆက်တွဲ) အခုထပ်ဆွဲထားတဲ့ ပုံသုံးပုံက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးပုံနဲ့ ရွှေလည်တိုင်ကျော့ကျော့ပိုင်ရှင် အမျိူးသမီးကလေးတစ်ယောက်ပုံပါ။ နောက်တစ်ပုံကတော့ ပန်းပွင့်တွေကိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးငယ်လေး။ သူ့ပုံလေးက ၀မ်းနည်းတဲ့ပုံပေါက်သွားတယ်။ အားလုံးကို အပေါ်က အိန္ဒိယပန်းချီစာအုပ်ထဲကပုံတွေပဲ ကြည့်ဆွဲ မှီငြမ်းပါတယ်။ ကြည့်လေ - ဆွဲသမျှဟာ မိန်းကလေးပုံတွေချည်း ဖြစ်နေပြန်ပါရော............။
အဟမ်း အဟမ်း အခုနောက်ဆုံး ကျြိးစားပမ်းစား ဆွဲထားရတဲ့ ယောက်ျားပုံလေး ကြည့်ပါဦး။ ဆရာဝန်ရုပ်ပေါက်နေသလိုပဲနော် -အလဲ့။
Posted by Me at 19:42
Lily 22 August 2009 at 12:21
Great Work Done ....a ma u are talented on art . u move many steps already,,,keep on......i'll follow your steps ...now i'm learning Chinese calligrapgy not only writing but also painting :) will share u my art work in the future ...with LOVE lily.
မိုးစက်ပွင့် 14 September 2009 at 14:59